12 Makhedheni Anonyanya Kufadza muEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 12 Makhedheni Anonyanya Kufadza muEurope
Ngirozi, nyowani, girazi-rakapendwa rine mavara mahwindo, zvimwe zvezvinhu zviri mu 12 machedhedral anonakidza muEurope. Kereke huru yega yega yakareba, yakakura, uye inokwezva kupfuura imwe, imwe neimwe iine zvinhu zveimwe.
1. Cathedral yeDuomo, Milan
Milan inokwezva mamirioni evashanyi gore rega rega. Kereke huru yeMilan, Cathedral yeMilan ndiyo imwe chiratidzo chinokushamisa kubva pakuona kwekutanga. Zvakatora 600 makore ekuvaka kereke hombe muItaly, elegant, nenyasha, uye inoyevedza mune yakajeka pink machena.
Yakatenderedzwa magirazi mahwindo, zvinhu zvegothic, uye chifananidzo chendarama cheMadonnina kumusoro ndezvimwe chete zvezvinhu zvinokufadza. saka, kana iwe uchinyatsoda kuyemura inonakidza gothic Milan kereke, ipapo unogona kufamba pamusoro pemba. saka, Kereke yeMilan ndiyo chete kereke huru pasi rose, kwaunogona kufamba pamusoro pemba.
Iyo chete kereke huru ichiri kuenderera kubvira 1882, Kereke ye Gaudi's Sagrada Familia, ibasa reunyanzvi. Kereke ye Sagrada inosanganiswa neSpanish Late Gothic, Art Nouveau, uye Catalan Modernism mapurani. Dhizaini yaGaudi yaive ye 18 spires, kumiririra iyo 12 vaapositori, Mhandara Maria, vaevhangeri vana, uye akareba Jesu Kristu.
Pamusoro pe, chimwe nechimwe chezvikamu zvitatu zvine kunze kwakasiyana zvachose: iyo Passion facade, Kubwinya, uye chizvarwa chekuzvarwa. saka, nezvakawanda zvekuona nekuwana, ronga rwendo rwako kuBarcelona zvakanaka, kuitira kuti usarasikirwe neichi chinoshamisa kereke.
3. Makhedheni Anonyanya Kufadza muEurope: Kolner Cathedral, Cologne
Yakavakwa pamusoro 7 mazana emakore, iyo Cologne Cathedral chiratidzo chinofema chekuvakwa kweGothic. Uyezve, Cologne cathedral ndiyo chigaro chaArchbishop weCologne uye kereke refu kwazvo yechirimo muEurope yese..
Sezvineiwo, ichi chinoshamisa chiratidzo chakashandiswa kuva chakatsiga uye huswa dura panguva yeFrance Revolution. nhasi, hauzoone chero zvisaririra zveichi chikamu munhoroondo yekedhedral. Iyo yemukati yakangonaka senge yekunze ine magirazi akasviba windows uye hupfumi. Kolner Dom inonyanya kufema usiku uye mwenje wekuvira kwezuva.
4. Basilica yeSanta Maria Del Fiore, Florence
Pink, girini yakajeka, uye chena machena machena, waMosesi uriri mukati, iyo Basilica di Santa Maria muFlorence inoshamisa yekumutsidzira kereke. Mukuwedzera, Fresco yaGiorgio Vasari yeLate Judgment padenga haifanirwe kushaikwa nevanoda zvehunyanzvi.
Cathedral yeFlorence inopfuura chiratidzo. Kunyangwe iwe usiri kufarira hunyanzvi, kereke iyi inokufadza uye inokuchengetedza uchiyemura mifananidzo inoshamisa kwemaawa. Kana iwe uchida mweya wekufema mweya, wobva wakwira kumusoro kuBrunelleschi Cupola kuti utarise zvemashiripiti Florence.
5. Makhedheni Anonyanya Kufadza muEurope: Charles Cathedral, Vienna
Chiratidzo cheVienna, St. Charles Cathedral inoshamisa mune chena facade uye yakajeka green green. Yakagadzirwa muBaroque maitiro, St. Charles cathedral inokwezva vashanyi kubvira iyo 19fung zana remakore. Kereke huru iyi yakagadzirirwa kukudza musande Charles Borromeo, anodyisa, uye gurukota rekutambudzika mumatambudziko eEurope mu 16fung zana remakore.
zvisinei, chinonyanya kufadza cheSt. Charles Basilica ndiye 1250 mativi metres frescos mune copula. Kusiyana nemamwe makereke eEuropean, pano iwe unogona kutora panoramic erevheta yekuyemura iyo frescoos padyo. saka, kupedza, St. Charles cathedral muVienna haifanirwe kupotsa pane yako guta zororo zororo muEurope.
6. Le Mans Cathedral, Furanzi
Yakatsaurirwa kuna Saint Julian, bhishopi wekutanga weLe Mans, Le Mans Cathedral, musanganiswa wakanaka weFrench Gothic uye Romanesque nave. Chimwe chezvinhu zvinonakidza zvinozobata pfungwa dzako ndezvemabhureki anotsigira ekunze mune rakajeka dhizaini. Saka iyo facade yeLe Mans Cathedral ndeimwe yeakanaka kwazvo muEurope.
Uyezve, girazi rakasviba uye ngirozi dzakapendwa padenga rekathedral kuwedzera kuLe Mans’ inoshamisa mavakirwo uye ndokusiira iwe yakawanda pfuma kuti uwane mukati megore rino ramakore mazana mashanu.
7. Makhedheni Anonyanya Kufadza muEurope: St. Pauro Cathedral, London
Inotonga kudenga kweLondon, asi kunze, Cathedral yeSaint Paul haisi imwe yenzvimbo dzinotyisa zvikuru. Runako rweSt. Paul's kereke inozozviratidza kana iwe ukatora nguva yekufamba mukati. ndokubva, iwe uchashamisika pakutamba kwechena uye nhema nhema. Uyezve, imba yechechi inopfuura 300 zviyeuchidzo zvezvakanaka zveBritain, vakadai saWren pachake akagadzira kereke yakanaka kwazvo.
zvisinei, chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza muSt. Paul's Cathedral ndiyo yekuzevezera gallery. Ehe, kana iwe uchizevezera kune rumwe rutivi rwegalari, madziro acho achaenda nawo kune mumwe mugumo.
8. Cathedral yeBerlin
Zvisinei nekukuvara zvakanyanya muWWII, Berlin Cathedral ikereke inoshamisa ine tsime nehuswa hwakasvibira kumberi. Berlin Cathedral yakavakwa sechikamu cheBerlin guta ramambo, asi mugadziri Julius Carl Raschdorff akaishandura kuratidza kubwinya uye hukuru hweSt. Paul's Cathedral muLondon. Chete mukati 1993, kudzoreredza kwakapedzwa, mushure mekudonha kwemadziro makuru eBerlin.
Zvinhu zvinonakidza kwazvo muBerlin's Cathedral ndiyo fresco, zvishongo zvegoridhe, uye zvifananidzo. Pamusoro pe, iyo Saucer nhengo ine yayo ine rudo uye inonzwika-mumhanzi mimhanzi ndiyo yekupedzisira uye hombe rudo chikamu kuGerman chakakodzera kupa nguva yekugara uye kungo nyora.. saka, enda kumusoro kune chikuva chekutarisa cheBerlin maonero eguta kuti upedze rwendo rwako mune imwe yeiyo 12 machedhedral anonakidza muEurope.
9. Makhedheni Anonyanya Kufadza muEurope: Mutsvene Basil's Cathedral, Moscow
rimwe iyo inonakidza nzvimbo dzekushanyira muRussia iSaint Basil's Cathedral muMoscow. Iwe haugone kupotsa ino inoshamisa kereke uye uchaiona kubva chero nzvimbo muRed Square nekupfuura. Paunenge uchiswedera padhuze, kereke yepakati ine dzimwe kereke pfumbamwe dzakatenderedza.
Chinhu chinonyanya kufadza ndechekuti idzi tembere dzakabatana nematanho akakosha akafukidzwa. Ivan anotyisa ndiye aive nyanzvi kuseri kwechechi yeSaint Basil, uye dzimba dze multicolor dzakavanzika kusvika nhasi. Nepo rudzi urwu rwekugadzira rwakaonekwa muzana ramakore rechi17, asi kusarudzwa kwemavara hakuzivikanwe.
Iyo gargoyles yakasimuka uye yakasviba-girazi mahwindo ari 2 yezvinhu zvinokukwezva sezvinoita mamirioni evamwe vashanyi kukereke ye Notre Dame muParis. Kunaka kwekunze, uye akanaka mukati, imba yekathedral inokutorera kumusoro kweguta rine rudo kwazvo pasi rose, nokuti Panoramic maonero.
Mukadzi wedu anomira muIle de la Cite uye akakumikidzwa kuMhandara Yakaropafadzwa. Pamusoro pe, iyo kereke huru yaive saiti yezviitiko zvikuru sekugadzwa kwaNapoleon Bonaparte, uye kurohwa kwaJoan weArc. saka, maziso ako anenge achiyemura runako rwekuvakwa kwecathhedral, uye nzeve dzako dzinoyemura nyaya dzekubwinya.
11. Makhedheni Anonyanya Kufadza muEurope: Saint Mark's Basilica, Venice
Iyo ndeimwe yemasilica akanaka kwazvo muEurope, asi zvinhu zvakavanzika izvo dzimba dzaSaint Mark's Basilica, kuchiita kereke inonakidza kwazvo muEurope. Maererano nengano, Saint Mark's Basilica yakavakwa kuti igadzire zvisaririra zvaMark muevhangeri, mumwe wevaapositori vana, mushure mekunge vatengesi vabira kubva kuEgipita. Iyi nyaya inoratidza yegumi nematatu zvemazana emakore, pamusoro pemusuwo wekuruboshwe paunopinda muchechi.
Mukuwedzera, Saint Mark's Basilica inochengetera pfuma inokosha kupfuura iyo Royal Family korona chishongo - iyo Pala dOro. Pala ishanduko yeByzantium, yakazara nezvakawanda kupfuura 2000 matombo anokosha. Kupedza, kana uri kuronga kushanyira imwe nharaunda muVenice, Saint Mark's Basilica ndiyo iyo, yekuda kuziva, runako uye vafambi venhoroondo-vanoda.
Mhiri kwenzizi, uye mabhiriji, mune inozivikanwa Prague Castle, you will be enchanted by Saint Vitus cathedral. It took close to 6 mazana emakore kupedzisa gothic cathedral, kunzvimbo inoshamisa uye inonyanya kuzivikanwa muPrague. Iyo yakawanda yenguva yakatora kuvaka iyo Saint Vitus Cathedral inoratidzwa mune yekuvaka musanganiswa wemastaera.
Saint Vitus cathedral ine Renaissance, Gothic, uye zvinhu zveBaroque: semhepo yeshongwe yekumaodzanyemba uye nhengo huru kuchamhembe chikamu. Mahwindo-egirazi mahwindo chinhu chinoshamisa mune chero kereke yeKathedral uye St.. Vitus 'windows haawire murunako kubva kune mamwe machedhedral anonakidza muEurope.
We achafara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwiki kune aya 12 anonakidza cathedral muEurope nechitima, Pinda nyika ye Save A Train.
Unoda here kupinza yedu blog positi " 12 Mazhinji Makedhedhi Anonakidza muEurope ”kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fmost-fascinating-cathedrals-europe%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Beautifulcathedralseurope chechi Duomo famouscathedralsineurope FascinatingCathedrals